विद्युत् संकट नेपालीका लागि अब नौलो विषय रहेन, दशकौंदेखि यो कायम रहँदै आएको छ । विद्युत् उत्पादनको शतक लामो इतिहास बोकेको देशमा अझै पनि बहुसंख्यक जनतासम्म विद्युत्को पहुँच पुग्न नसक्नु विडम्बना हो । जोसँग विद्युत्को पहुँच पुगेको छ, उनीहरू पनि आधाभन्दा बढी समय विद्युत्विहीन अवस्थामा बस्नुपरेको छ । निर्माताहरूको ध्यान जान जरुरी छ । एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर हुँदा भोलिका दिनमा त्यो कति दिगो हुन्छ ? त्यो एउटा स्रोतमा समस्या आउँदा सम्पूर्ण विद्युत् आपूर्तिको प्रणाली नै धराशयी हुन सक्ने खतरा सधैं रहन्छ । त्यसैले अब नेपालले जलविद्युत्का विषयमा मात्रै होइन, इनर्जी मिक्स (ऊर्जाका विभिन्न विकल्पको मिश्रित उपयोग) का विषयमा पनि सोच्नुपनेर् हो कि ? सराकार पक्षले ध्यान दिनुपर्छ । ऊर्जा आपूर्तिको आर्थिक एवम् सामाजिक हैसियतसँग जोडिएको विद्युत्का सन्तुलन मिलाउन इनर्जी मिक्सको अवधारणा विभिन्न स्रोतहरूको नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेको ल्याउँदा जलविद्युत्लाई विस्थापित गर्ने वा यसको विषयमा धेरै योजनाहरू निर्माण भए, केही हुने क्रममा भूमिकालाई कम गर्ने होइन । यहाँ धेरैले त्यसरी बुझ्ने गरिका पाइन्छ । दशका आर्थिक समृद्धि तथा औद्यागिक आर्थिक समृद्धिको अभिभारा बोकेको तथा मुलुकको छन् । तर, वास्तविक र यथार्थ योजना नबनाउँदा ऊर्जा संकटको भयावह स्थिति उत्पन्न भएको हो । जलको मात्रै होइन, वायु, सौर्यलगायतका स्रोतको पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना रहेको भन्दै गर्दा, बनेका योजनाहरूको सफल कार्यान्वयन किन हुन सकेन ? भन्नेतर्फ सरोकार राख्ने पक्ष सबैले एक पटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । वास्तवमा नेपालको ऊर्जाको आवश्यकता कति हो ऊर्जाको आपूर्तिका स्रोतहरू के–के हुन सक्छन् ? आगामी दिन के कस्ता रणनीतिहरू आवश्यक पर्न सक्छन्, हालसम्म बनेका रणनीतिहरू किन असफल भए, यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ । समयको परिवर्तनसँगै विश्व बजारमा ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको विकास हुँदै गएको सन्दर्भमा ऊर्जाका परम्परागत स्रोतको मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था नहुने संकेत देखा परिसकेको पृष्ठभूमिमा अब नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भावना छ मात्रै भनेर बस्ने कि यसको छिटो र बहुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर हुने कि अन्य सम्भावनाको पनि उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा योजना क्रान्तिका
स्रोतको निर्भर हुँदा भोलि उत्पन्न हुने खतरा टार्नका लागि यसको आवश्यकता परेको हो । विश्वका विकसित र जलविद्युत्मा नेपालभन्दा बढी सम्भावना भएका देशमा समेत यस किसिमको प्रयोग हुँदै आएकाले अब नेपाल त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । इनर्जी मिक्सको अवधारणालाई अगाडि बढाएको अवस्थामा हाल नेपालमा जारी विद्युत् संकटको पनि केही हदसम्म न्यूनीकरण हुने थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा इनर्जी मिक्सको अवधारणा अगाडि बढाउँदै गर्दा थर्मल प्लान्ट वा अन्य प्रविधिलाई मेरुदण्ड जलविद्युत् नै हो । तथापि, एउटै मात्र भन्दा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोततर्फ बढी ध्यान दिनुपनेर् देखिन्छ । यसले ऊर्जा आपूर्तिका साथै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्छ । यसका अतिरिक्त आन्तरिकरूपमा नै आपूर्ति हुने भएकाले यसमा सरोकार राख्ने निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।